Ko Toe: အားလုံးကို သတိရပါတယ်
Posted by MYO HAN HTUN at 10:59 AM
သြော် ကိုတိုးက ကိုတင်ကိုနဲ့ရော ရွှေစင်နဲ့ပါ သိတယ်ပေါ့...
ကြည့်ရပုံအရ .. သူတို့လည်း .. ကိုမောင်လှ ဘော်ဘော်တွေ ဖြစ်ပုံရမယ် .. :)
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီအချိန်တွေကို အမြဲသတိရနေတာဗျ .. အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော် ငယ်သေးတယ် ... ခုချိန်နဲ့စာရင်ပေါ့:)
အဲဒီအချိန်တွေကို ပြန်တွေးမိတိုင်း အားလုံးကို သတိရတယ် ... ပြီးတော့ ပျော်လည်း ပျော်တယ်ဗျ ...
ကျွန်တော့်ကို အဲဒီလိုကြီးရေးထားတာ .. ရှက်စရာကြီးဗျာ :D
“မောင်ကိုတိုး တစ်ယောက်ဖြင့် စူစကာ ပုဏ္ဏား လှူတာအကုန်စား .. စားချင်ရှာလွန်းလို့ Blog ပေါ်ထိ လာရေးရတယ်”ကိုတိုးရေ သူများမဖွခင် ကိုယ်ဖွထားတော့ တော်တာပေါ့ :P
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ သတိရလာပြီ
ဖွတာဆိုတာ ဘာလဲဗျ .. အမိုက်ပုံလား? သို့ အ၀တ်ဗီရိုကိုလား? .. ဖွချင်ရင်တော့ ဖွပေါ့ .. ဒါပေမယ့် ပြန်ပြီးတော့ မီးပူတိုက်၊ သေသေချာချာခေါက်ပေးခဲ့ .. :)
သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရလာရင်လည်း သူတို့ဆီ စာလေးဘာလေးရေးပေါ့ .. :)
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော့် ရော `သတိရရဲ့လား သတိရရဲ့လားလို့ ငါမေးချင်လဲ တိုးကမကြားနိုင်ပဲ´ အဲ့လိုဖြစ်နေပြီဗျ...။
`သတိရရဲ့လား သတိရရဲ့လားလို့ ငါမေးချင်လဲ တိုးကမကြားနိုင်ပဲ´ ...
ဟ ... “တိုး” တဲ့ .. အမလေးဗျာ .. အဖျားစွတ်ခေါ်လိုက်တာ .. ကျွန်တော့်များ .. ကောင်မလေးများမှတ်နေလား ကိုနေကြီးရေ .. :)
ကိုတိုးရေ.. နုပျိုပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပုံကြည့်ပြီး စိတ်ထဲကြည်နူးသွားတယ် ။
အဟီ ငယ်၂ကကိုတိုးမျက်နှာက ပြုံးဖြီး၂ကြီးပါလားး)